Zhuwawo snubs Mutsvangwa,calls for his expulsion from the party | iHarare News
Last updated on February 8th, 2016 at 09:31 pm
Minister Zhuwao, flanked by Zanu-PF Mashonaland West provincial chairperson Cde Ephraim Chengeta and his deputy Cde Keith Guza, told a media briefing yesterday that he has no “modus vivendi” with Cde Mutsvangwa.
Cde Zhuwao said: “I wish to state that I haven’t agreed to disagree with Chris Mutsvangwa.”
This follows weekend private media reports in which Cde Mutsvangwa, who is also the Minister of Welfare Services for War Veterans, War Collaborators, Former Political Detainees and Restrictees, was quoted as saying “he had a modus vivendi with both (Cde) Saviour Kasukuwere and (Cde) Zhuwao”.
“I wish to correct an impression created by Chris Mutsvangwa wherein he indicated he has a modus vivendi with Kasukuwere and Zhuwao,” said Cde Zhuwao.
“I wish to state that I haven’t agreed to disagree with Chris Mutsvangwa, especially in light of his stated cordial relations with the EU, which has imposed sanctions on Zimbabwe and still maintains them.”
He said that the EU’s position on President Robert Mugabe and First Lady Grace Mugabe, whom Cde Zhuwao said “are an embodiment of the sovereign State of Zimbabwe”, makes it unacceptable for any leader in Zanu-PF to contemplate or announce that they have cordial relations with the EU.
“I can never reach accommodation with those that hob-nob with such retrogressive forces who’ve a proven track record of consistently attempting to effect regime change in Zimbabwe and thus undermining sovereignty of this nation.”